दाँत पहेंलो | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "पहेंलो दाँत"
आफ्नो दाँत प्राप्त पैसा र धेरै लाग्न सक्छ समय-खपत. त्यहाँ एक विधि र प्रविधिको technology.This लेखमा धेरै नवीनतम गर्न सबै प्राकृतिक उपचार देखि दायरामा गर्न सक्ने दाँत सेतो तपाईं चाँडै र प्रभावकारी काम सिद्ध दाँत-whitening, सुझाव चाहनुहुन्छ भने पढ्न एक देखाउनेछ खरिदका लागि आज धेरै छन्.
सबैभन्दा छिटो परिणाम लागि, खोजी व्यावसायिक whitening, सेवाहरू. तिनीहरू हुन सक्छ केही छोटो यात्रा लिन, र नाटकीय परिणाम चिरकालीन हुन हुनेछ. दाँत दांत मिश्रण आफ्नो दन्त चिकित्सक पहुँच छ कि आफ्नो स्थानीय दबाइ दोकान मा तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ के भन्दा धेरै प्रभावकारी छन्.
टिप! Whiter कायम राख्न, क्लीनर दाँत, नियमित दन्त cleanings अत्यावश्यक छन्. बनाउन अग्रिम समय प्रशस्त निर्धारण गरेर आफ्नो छ महिना भेटघाट राख्न निश्चित.
आफ्नो Whiter दाँत गर्न केही दन्त भ्रमणमा. दन्त चिकित्सक माथि-द-काउन्टर खरिद गर्न सकिन्छ भनेर दाँत प्रक्रियाहरु दांत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो दाँत सेतो गर्न स्ट्रबेरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. स्ट्रबेरी को जैविक मेकअप कठोर रसायन बिना आफ्नो दाँत सेतो मदत गर्न सक्छ. Puree स्ट्रबेरी एक घर टूथपेस्ट बनाउन, वा ताजा स्ट्रबेरी आफ्नो दाँत मा सिधै रगडना.
टिप! कच्चा पदार्थ, फल र तरकारी विशेष गरी स्वस्थ आफ्नो दाँत राख्न. प्रशोधन र मात्र अस्वस्थ खाद्य पदार्थ पहेलो आफ्नो दाँत बारी, तर पनि cavities हुन सक्छ.
कागति र सुन्ताला तपाईं दिन भिटामिन सी, तर तिनीहरूले पनि छ दाँत-दांत properties.Rub एक सूक्ष्म whitening, प्रभाव लागि आफ्नो दाँत विरुद्ध बोक्रा को भित्र. तपाईं पनि देखिने परिणाम सुधार गर्न peels गर्न नुन को एक सानो बिट थप्न सक्नुहुन्छ यो विधि प्रस्तुत हुनेछ.
whitening, उत्पादनहरु समावेश निर्देशनहरू प्रयोग. बरु, यो गम र मुख जलन हुन सक्छ, र पनि विशाल दन्त क्षति. प्याकेज मा निर्देशन रूपमा उत्पादन ठ्याक्कै र केवल दांत दाँत प्रयोग.
टिप! एक सरल तर प्रभावकारी प्राकृतिक पदार्थ बेकिंग सोडा छ. पानी मिश्रित, यसलाई आफ्नो दाँत सेतो मदत गर्न सक्छ.
आफ्नो दाँत राख्न प्रयास गर्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा उचित दन्त cleanings रही छ. आफ्नो दाँत हरेक छ महिना साफ र आफ्नो वर्तमान सफाई लागि कार्यालयमा गर्दा आफ्नो भविष्य नियुक्ति बनाउन.
तपाईं एक Whiter मुस्कान भएको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो कुरा नियमित cleanings लागि आफ्नो दन्त चिकित्सक भ्रमण गर्न छ. नियमित यी cleanings दुई पटक हरेक वर्ष तालिका. आफ्नो सफाइ संग जब गरेका, त्यसैले तपाईं भूल छैन आफ्नो निम्न नियुक्ति सेट अप. तपाईं द्वारा फोन एउटा सम्झाउने दिन आफ्नो कार्यालय प्राप्त.
टिप! दाँत टूथपेस्ट दांत साँच्चै धेरै नियमित टूथपेस्ट फरक छैन. यो साँच्चै उत्पादनहरु पैसा बर्बाद फरक धेरै गर्न हुनेछ कि सबै भन्दा राम्रो विचार छ.
स्वस्थ खाद्य पदार्थ खान; फल जस्तै कच्चा पदार्थ सिद्ध उदाहरण हुन्. आफ्नो दाँत स्वस्थ दाँत छन् सुनिश्चित गर्न खाद्य यी प्रकार टाढा रहन. एक राम्रो मुस्कान लागि खेलकुद जब तपाईं पनि snacking हुँदैन.
एक पराल मार्फत पिउने Whiter दाँत कायम गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि धेरै सानो चाल को छ. तपाईं एक पराल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तरल कम संभावना आफ्नो दाँत को सतह सम्पर्कमा आउन छ. तरल आफ्नो दाँत छल्न र आफ्नो घाँटी जानेछैन.
टिप! प्राप्त र सेतो दाँत कायम राख्न, माझ्छु र आफ्नो दाँत असफल बिना हरेक दिन floss. तपाईं यो भने, यो पट्टिका को गठन अप दाँत discoloration गराउँछ कि हटाउनेछ.
यो राम्रो तरिकाले वास्तवमा दस्तावेज छ चुरोट धूम्रपान उत्पादित चुरोट को धुवाँ आफ्नो दाँत तपाईं सास लिनु हरेक समय discolors कि.
भएको आफ्नो दन्त चिकित्सक गरेको Whitening साँच्चै तपाईं परिणाम आवश्यक कसरी चाँडै निर्भर, र कसरी साह्रै आफ्नो दाँत दाग गरिएको छ. हुनत यो अधिक महंगा हुनेछ, तपाईं छरितो संग अन्त हुन सक्छ, तपाईं भन्दा बढी प्रभावशाली परिणाम अन्य दांत प्रविधी मार्फत प्राप्त हुन सक्छ.
टिप! रेड वाइन connoisseurs, नियमित imbibe गर्ने विशेष गरी ती, दाँत discoloration छ गर्छन. रातो रक्सी रंग जो तिनीहरूलाई गाढा बनाउँछ दाँत गरेको तामचीनी मा अवशोषित हुन्छ.
नियमित टूथपेस्ट र दांत दाँत pastes आश्चर्यजनक similar.You आफ्नो दाँत मा सफेदी परिवर्तन गर्दैन एक उत्पादन खर्च गर्नुपर्छ छैन. तपाईं कि तपाईंको समय र पैसा बर्बाद गरिनेछ तपाईं एक लाभ दिंदैन.
तपाईं धूम्रपान भने, त्यसपछि तपाईं आफ्नो दाँत दांत को कुनै पनि मौका छ रोक्न पर्छ. एउटा व्यावसायिक whitening, प्रक्रिया मुद्रा को एक महत्वपूर्ण राशि लागत. तपाईं यस्तो प्रक्रिया गरेको र त्यसपछि भने माथि एक चुरोट प्रकाश, तपाईं टाढा भनेर पैसा हालियो छन्. यो whitening, तुरुन्तै धूम्रपान द्वारा उल्टाउन हुनेछ.
टिप! यो माझ महत्त्वपूर्ण छ, गम मालिश, र दुई पटक एक दिन कम्तिमा floss. लिंदा र flossing हरेक खाजा र खानाको आफ्नो दाँत सेतो रहन मदत गर्न सक्छ निम्न.
दायाँ खाने पछि आफ्नो दाँत लिंदा तिनीहरूलाई discoloring देखि राखन को एक महत्वपूर्ण भाग हो. यो कफी आउँदा यो निश्चित साँचो छ.
तपाईं आफ्नो मुस्कान रोशन घर मा प्रयोग गर्ने एक दांत जेल लागि आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न. यो विधि तपाईं धेरै हप्तासम्म प्रत्येक रात जेल संग भर्न र समय को एक निश्चित रकम लागि आफ्नो दाँत लागू हुनेछ कि दन्त चिकित्सक एक मुख ट्रे तपाईंलाई प्रदान समावेश. यो प्रविधी गर्न आठ रंग brighter आफ्नो मुस्कान सेतो गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुपर्छ.
टिप! तपाईं हाल गर्भवती हुनुहुन्छ भने, दाँत whitening उत्पादनहरु को कुनै पनि प्रकारको प्रयोग नगर्न! यी उत्पादनहरू’ सामाग्री आफ्नो बढ्दै बच्चा लागि हानिकारक हुन सक्छ. Whitening टूथपेस्ट गर्भावस्था को समयमा प्रयोग गर्न सामान्यतया ठीक हो, तर निश्चित हुन आफ्नो डाक्टर वा दन्त चिकित्सक संग जाँच.
आफ्नो दाँत सुनिश्चित गर्न सबै भन्दा राम्रो एक हो तिनीहरूलाई सफा गर्न दन्त चिकित्सक गएर नियमित भेटघाट छ.
कि whitening, मा माहिर एक mouthwash प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्. यो परिणाम प्राप्त गर्न महिना लाग्न सक्छ. यी mouthwashes हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनिने दांत रासायनिक समावेश. यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ. बस तपाईं आफ्नो दाँत माझ्छु अघि करिब आधा एक मिनेट लागि दुई पटक एक दिन कुल्ला.
टिप! Flossing महत्त्वपूर्ण छ. Flossing प्राप्त पट्टिका छुटकारा मद्दत गर्छ, जो आफ्नो दाँत को discoloration हुन सक्छ.
स्याउ खाने आफ्नो दाँत तिनीहरूले वास्तवमा भन्दा Whiter हुनुको भ्रम दिन ठूलो तरिका हो. Crunchy खाद्य पदार्थ र तरकारी आफ्नो तामचीनी मा धेरै क्षति बिना तपाईं आफ्नो दाँत सफा गर्न मद्दत गर्न सक्ने घर्षण गुणस्तर छ.
ओखर रुखकोबोक्रा तिनीहरूलाई दल्नु आफ्नो दाँत पुरानो जमानाको बाटो सेतो. आफ्नो दाँत मा यो दल्नु राम्ररी तिनीहरूलाई सफा र तिनीहरूलाई Whiter बनाउँछ. छाल प्रयोग गर्दा आफ्नो मुख बाहिर कुल्ला गर्न निश्चित हुनुहोस्, र त्यसपछि माझ.
टिप! दुग्ध पदार्थ को ठूलो परिमाणमा खपत. दूध जस्तै खाद्य पदार्थ, पनीर र दही सबै तपाईं बलियो दिन मदत गर्न सक्छ कि खनिज छ, तपाईं इच्छा छ कि आकर्षक दाँत.
तपाईं आफ्नो दाँत सेतो गर्न हाइड्रोजन पेरोक्साइड लागू गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं बस समाधान मा डूबा एक washcloth वा कुनै पनि कपास सामाग्री dipping द्वारा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं यसलाई dampened गरेपछि आफ्नो दाँत को क्षेत्रमा भन्दा गीला कपडा RUB. यो पेरोक्साइड दाग हल्का गर्न काम गर्नेछ र कपडा तिनीहरूलाई उचाल्न मद्दत गर्छ.
राम्रो पाउडर बनाउन खाडी पात र सुन्तला peels प्रयोग. यो पाउडर र ब्रश यो मिश्रण संग पानी थप्न. दांत दाँत बाहेक, यो गम रोग र cavities रोक्न मदत गर्नेछ.
टिप! एक ओखर रूख देखि छाल एक दाँत whitener रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. दन्त सतहहरु भर छाल दल्नु आफ्नो दाँत देखि दाग र yellowish फिलिम उचाल्न यसलाई सक्षम हुनेछ.
आफ्नो दाँत गरेको रंग तपाईं bothers भने, विकल्पहरू लागि आफ्नो दन्त चिकित्सक परामर्श. केही मानिसहरू लाग्छ दाँत दांत एक खर्चालु खर्च छ, बन्द-रंग दाँत भएको तपाईं आफ्नो जीवन बिताउन कसरी असर गर्न सुरु हुन्छ भने हुनत, यसलाई आफ्नो आत्म-विश्वास निर्माण भएकोले यसलाई लायक हुन सक्छ.
तपाईं दाँत प्रयास अघि आफै दांत, सधैं पहिलो आफ्नो दन्त चिकित्सक संग परामर्श गर्न निश्चित. कहिलेकाहीं दाग लागेको दाँत एक राम्रो स्वच्छता गोद द्वारा तय गर्न सकिन्छ. दांत उत्पादनहरू प्रयोग को संभावना बारे आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न. आफ्नो मुख उत्पादनहरु को यिनी प्रकार प्रयोग सुरु गर्न अवस्थामा छ कि छैन भनेर आफ्नो दन्त चिकित्सक गर्न रूपमा सल्लाह गर्न सक्छन्. Cavities वा गम रोग मात्र तपाईं तिनीहरूलाई उत्पादन दांत एक दाँत प्रयोग गर्नुहुन्छ भने खराब हुनेछ.
टिप! के तपाईं आफ्नो मुस्कान सेतो राख्न चाहनुहुन्छ भने कफी र चिया जोगिन आवश्यक. अत्यधिक मात्रा पिउने गर्न सक्नुहुन्छ, समयको क्रमसँगै, महत्वपूर्ण staining कारण.
तपाईं Whiter दाँत चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो दाँत गर्न Vaseline एक कोट लागू. यो एक अनुकूल स्वाद नहुन सक्छ, तर यो धेरै घन्टा को लागि आफ्नो दाँत र दाग बीच एक सुरक्षा बाधा प्रदान गर्नेछ.
तपाईं खान पछि, केही गम सेतो मदत गर्न चपाउनु र आफ्नो दाँत सफा. केही चबाने मसूडों विशेष गरी दाँत सेतो गर्न उत्पादन गर्दै, र पनि तिनीहरूलाई सेतो राख्न. यी मसूडों आफ्नो दाँत चम्किरहेको राख्न हुनेछ दाग-झगडा सामाग्री सुविधा. चिविङ गम पनि आफ्नो दाँत कुनै पनि खाद्य कण धुन गर्न मद्दत गर्नेछ प्राकृतिक र्याल उत्पादन.
पहेंलो दाँत धूम्रपान भनेर कसैले एक सजिलै सजिलै देखिने चिन्ह छ. यो तपाईं धूम्रपान यदि दाँत सेतो मुस्कान राख्न बरु गाह्रो हुन सक्छ. तपाईं धूम्रपान गर्न छ भने, तपाईं निश्चित तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो मुस्कान लाभ उठाउन धूम्रपान कति कम गर्नुपर्छ.
आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न उहाँले तपाईं एक जेल दिन सक्छन् भने घर whitening, किरा मा उपयोग गर्न सकिन्छ. यो विधि अप गर्न आठ रंग brighter आफ्नो दाँत सेतो गर्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो दाँत Whiter हुन, तपाईं नियमित दन्त सफाई भेटघाट हुनुपर्छ. नियमित दन्त cleanings छ भन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू बीचमा तपाईं खुराक दांत आफ्नो दाँत मा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं एक वर्ष आफ्नो दन्त चिकित्सक कम्तिमा दुई पटक भ्रमण गर्न आवश्यक.
Whitening gels Whiter आफ्नो दाँत सेतो उपलब्ध छन्. तपाईं लागूपदार्थ स्टोर मा यी gels खरीद गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूले रही एक दन्त चिकित्सक द्वारा दागरहित बनाइन्छन् आफ्नो दाँत भन्दा सस्ता छन्. आफ्नो दाँत अस्वस्थ वा धेरै discolored हेर्न भने, तपाईं पहिले दन्त चिकित्सक गर्न जानु पर्छ.
उठ्दै मा आफ्नो दाँत माझ्छु, र तपाईँले आफ्नो दाँत Whiter प्राप्त हेर्न ओछ्यानमा जान चाहनुहुन्छ रूपमा.
Mouthwash वास्तवमा आफ्नो दाँत को discoloration तपाईं mouthwash प्रयोग को प्रभाव सामना गर्न सक्छन् भनेर दाँत छ वा छैन आफ्नो दन्त चिकित्सक discoloration.Ask बढाउन सक्छ.
हाइड्रोजन पेरोक्साइड दाँत सेतो गर्न एक सुरक्षित तरिका छैन. यो असुरक्षित छ र थप discolored बन्न वास्तवमा आफ्नो दाँत पार्नसक्छन्. सबै उत्पादनहरु हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ कि आफ्नो दाँत पर्याप्त स्वस्थ छैन भने जोगिन.
यो अत्यधिक तपाईं आफ्नो दाँत दागरहित बनाइन्छन् गरेको सिफारिस गरिएको छ रही यो straighter र सुधार मुस्कान छ देखि तपाईं आफ्नो नयाँ मुस्कान देख्न गर्दा तार braces.You खुश हुनेछ अघि!
दन्त चिकित्सक दाँत सेतो गर्न सक्ने एक विशेष रोशनी साथ व्यावसायिक विरंजन पदार्थ धेरै रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं 15 रंग धेरै चाँडै. प्रक्रिया यस प्रकारको सामान्यतया पाँच सय डलर एक सत्र वरिपरि खर्च हुनेछ.
आफ्नो दाँत निरन्तर नीरस वा पहेंलो हेर्न भने, आफ्नो मनपर्ने पेय पदार्थ दोष हुन सक्छ कि विचार. रेड वाइन र कफी दाँत दाग लागि परिचित छन्. दाँत सम्पर्क सम्पर्क समय सीमा यी पेय पदार्थ पिउने गर्दा पराल प्रयोग.
दाँत लिंदा लागि आफ्नो स्ट्रबेरी टूथपेस्ट बनाउन. स्ट्रबेरी आफ्नो दाँत मा एक दांत प्रभाव हो. आफैलाई लागि केही पेस्ट अप मिश्रण गर्न, पानी संयोजन (1/4 कप), बेकिंग सोडा (1/2 कप) मसले गरिएका र तीन स्ट्रबेरी.
तपाईं उपयुक्त छहारी लिपस्टिक रंग लगाएका गरेर आफ्नो दाँत एक Whiter उपस्थिति छ बनाउन सक्छ. तिनीहरूले गाढा हेर्न गर्छन किनभने रातो लिपस्टिक discolored दाँत कारण हुनेछ. discolored दाँत लागि सबै भन्दा राम्रो रंग pinks वा नग्न रंग हो.
तपाईं महंगा हुन सक्छ चाहनुहुन्छ सेतो दाँत रही र एक परेशानी को केहि. त्यहाँ Whiter दाँत रही आफ्नो प्रयास सहायता उपलब्ध धेरै विधिहरू छन्. यहाँ राखिएको सुझावहरू लागू, त्यसैले तपाईं दन्त चिकित्सक मा पेशेवर गरेको प्रक्रिया रही बिना आफ्नो दाँत सेतो गर्न सक्नुहुन्छ.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 5, 2016 12 मा:44 AM
विभाग: सेतो दाँत सुझाव ट्याग: मद्यपानोत्सव मुस्कान, मुस्कान मद्यपानोत्सव, स्वस्थ दाँत, पहेंलो दाँत, भिटामिन सी